GlobalNet | How to customer support DIA Services
GlobalNet ၏ Dedicated Internet Access Internet Plan ကို သုံးစွဲနေသော Customers များအနေဖြင့် အခက်အခဲ တစုံတရာရှိပါက ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရရှိနိုင်မည့် အချက်များ
1. ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် GlobalNet Media Converter Modem ပေါ်မှာရှိတဲ့ OLOS LED မီး သို့မဟုတ် FX LED မီးလုံးအခြေအနေများကို စစ်ဆေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ OLOS LED မီးဆိုသည်မှာ Optical Loss Of Signal ဖြစ်ပြီး Media Converter Modem စက်တွင်ရှိသော အချက်ပြ Signal မီးလုံးဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံမှာ OLOS LED Signal တည်ရှိသောနေရာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါပုံမှာ FX LED Signal မီးလုံးတည်နေရာကို ပြသထားသောပုံဖြစ်ပါသည်။
2. GlobalNet Media Converter Modem ပေါ်မှာရှိတဲ့ OLOS LED မီး နီနေခြင်း သို့မဟုတ် FX LED မီး မလင်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေပါက Fiber Cable အား စစ်ဆေးရန်လိုအပ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် GlobalNet Service Specialist သို့ အကြောင်းကြားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
GlobalNet Service များနဲ့ ပတ်သတ်သည့် အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် Email address များသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
YGN Customer Service Desk 24/7 – PH: 09-261825557, 09-777833022 Email : servicedesk@globalnetmm.com
MDY Customer Service Desk 24/7 – PH: 09 888615226 , 09 888615227 Email:servicedeskmandalay@gmail.com
3. GlobalNet Media Converter Modem ပေါ်မှာ OLOS LED မီးလုံး နီမနေခြင်း (သို့မဟုတ်) FX LED မီး လင်းနေပါက Modem ကို Power အဖွင့်/အပိတ် လုပ်၍ စမ်းသုံးကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါသည်။
GlobalNet Service များနဲ့ ပတ်သတ်သည့် အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် Email address များသို့ ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
YGN Customer Service Desk 24/7 – PH: 09 261825557, 09 777833022 Email : servicedesk@globalnetmm.com
MDY Customer Service Desk 24/7 – PH: 09 888615226, 09 888615227 Email : servicedeskmandalay@gmail.com
4. Website error / Webmail error / Google server ping high latency/Game server ping high latency အခက်အခဲ များ ဖြစ်ပေါ်နေပါက လူကြီးမင်းရဲ့ Customer end ဘက်ခြမ်းမှ ထို server များကို (Ping and Traceroute) ပြုလုပ်ထားသော result များအား စစ်ဆေးရန်အချက်အလက်များ လိုအပ် ပါသောကြောင့် ကျေးဇူးပြုပြီး GlobalNet Service Specialist သို့ ပေးပို့အကြောင်း ကြားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
5. GlobalNet Service Specialist ဘက်မှ သက်ဆိုင်ရာ Technical Team များနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
New opportunities for rethinking...
Rethinking the workplace also ...
Desktop asaService...
ရုံးတွင်းဝန်ထမ်းများသာမက ရုံးပြင်ပသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေရသောဝန်ထမ်းများပါ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ...